Indawo ethe tyaba yokugrumba abaxhasi kunye nefektri - China Horizontal yolwalathiso lokomba izixhobo rig abavelisi
I-XZ420E yecala lokukhomba ulayini we-rig uneqondo eliphezulu lokuphinda uguqule i-900mm, amandla amakhulu okutsala amandla e-500kN, i-torque ye-18500N · m, kunye nobunzima bomatshini obungenanto be-11.2t.
I-XZ3600 ethe tyaba yomgaqo wokugrumba isixhobo sokurhola sinobukhulu obuphindaphindeneyo bokuguqula ubukhulu be-1600mm, amandla amakhulu okutsala amandla e-3600kN, itorque ye-120,000N · m, kunye nobunzima bomatshini obungenanto be-48t.
I-XZ6600 ethe tyaba yesikhokelo sokugrumba isixhobo esinobubanzi obuphindaphindeneyo bokuguqula i-2000mm, amandla amakhulu okutsala amandla angama-6600kN, itorque ye-210,000N · m, kunye nobunzima bomatshini obungenanto be-70t.
I-XZ450Plus yecala elithe tyaba lokugrumba i-rig ine-ream sangqa ephezulu ye-1000mm, amandla amakhulu okutsala amandla e-960kN, itorque ye-23500N · m, kunye nobunzima bomatshini obungenanto be-20t.
I-XZ680A i-rig ethe tyaba yokugrumba i-rig ine-reaming ubukhulu be-1000mm, amandla amakhulu okutsala-725kN, i-torque ye-31000N · m, kunye nobunzima bomatshini obungenanto be-21t.